LibreOffice dia manomana ny fanohanana QT5 ho an'ny kinova manaraka | Avy amin'ny Linux
LibreOffice dia manomana ny fanohanana QT5 ho an'ny kinova manaraka
LibreOffice dia biraon'ny multiplatform open source, izay miasa ho toy ny fanoloana saika ny Microsoft Office. Ity suite ity dia forkan'ny OpenOffice 3.3.0 ary nahazo vahana tamin'ny fizarana Linux ho toy ny biraon'ny birao default.
Nosoloiny ny OpenOffice amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux ankehitriny ary manana fanohanana tsara ho an'ny .doc, .xls, .odt, .ods, ary endrika malaza hafa io.
Izy io dia manana mpikirakira teny (Mpanoratra), mpamoaka lahatsoratra (Calc), mpitantana fampisehoana (Impress), mpitantana data (Base), tonian-dahatsary sary (sary) ary formula matematika (Matematika).
Natao hifanaraka amin'ireo efitrano fampiasa amin'ny birao lehibe, ao anatin'izany ny Microsoft Office, na dia misy aza ny endrika famolavolana sasantsasany sy ny endriny endrika tsy mitovy amin'ny fomba hafa na tsy tohanana.
Tamin'ny taon-dasa dia nampiditra plugin iray interface interface ao amin'ny Qt5 ny LibreOffice tamin'ny fidirana tsara kokoa amin'ny tontolo iainana miorina amin'ny Qt, ho traikefa tsara kokoa.
1 Momba ny fanatsarana voaray
1.1 Ny kinova LibreOffice manaraka dia horaisina amin'ny taona ho avy
Momba ny fanatsarana voaray
Amin'ny andro farany nisy ny fanatsarana bebe kokoa tamin'ity fampidirana Qt5 ity hahafahan'ity suite miasa ity hahomby kokoa miaraka amin'ny tontolo iainana miorina QT5 toy ny KDE Plasma ary ankehitriny LXQt.
Ireo fanatsarana azontsika asongadina ireo dia ny fanohanana voalohany ny solaitrabe Qt5.
Nahita fanatsarana maro izahay tao amin'ny interface plug-in QT5 / KDE5 Miaraka amin'ny LibreOffice, nanomboka teo, kaody fanampiny no nampiana.
Ny andiany farany nataon'i Git dia manome fanohanana QT5 tsara kokoa, ao anatin'izany ny kaody sy / na mametaka kaody sy sary HTML.
Ny safidy fananganana -enable-kde5 LibreOffice dia manampy izao ihany koa –enable-QT5. Ankoatr'izay, nisy ny fanamboarana fanamboarana mifandraika amin'ny Qt 5.11 sy ny fanatsarana hafa.
Ny zava-baovao iray hafa dia ny Ny LibreOffice dia nanaiky farany ny LXQt ho tontolon'ny birao Linux tohana.
Ny detection LXQt dia mamela an'ity biraon'ny birao ity hampiasa ho azy ny fampidirana ny kisary Breeze.
Ka mihazakazaka an'ity tontolon'ny birao ity ianao amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny lalan'ny kaody mitovy amin'ny fanohanan'ny KDE5.
Anisan'ireo fanatsarana tonga tao amin'ny sampana fampandrosoana Libreoffice ananantsika:
Fanohanana amin'ny fitantanana ny fanaraha-maso ny fihetsiky ny zanatany avy amin'ny KDE 5 ary koa ny fametrahana loko
Fanatsarana ny fikirakirana mangarahara Qt 5
Betsaka ny zavatra nampiana hanatsarana ny fanohanan'ny Qt5Frame ao amin'ny KDE 5
Fanatsarana isan-karazany amin'ny fampiasa amin'ny Qt5
Fanohanana ny fiasan'ny clipboard Qt5, ao anatin'izany ny zavatra hafa, ny fahaizana mandika / mametaka lahatsoratra tsotra avy ary mankany amin'ny takelaka misy ny rafitra.
Ireo fanovana vaovao voalaza ireo vHo tafiditra ao amin'ny andiany 6.2 an'ny Libreoffice manaraka izy ireo.
Ireo fanatsarana ireo Tsy hamela ny fifanakalozan-dresaka fisafidianana rakitra Plasma 5 fotsiny izy io, fa hanome fampidirana tsara kokoa amin'ny birao. ary hanome ny fanohanana marina ho an'ny Wayland sy DPI
Ny zanadrafitra VCL (Visual Components Library) dia ahafahanao mamintina ny volavolan'ny LibreOffice amin'ny fitaovana isan-karazany, manome ny fahaizana mampiasa boaty fifanakalozan-kevitra, bokotra, baravarankely ary widgets izay misy ny tontolon'ny sary tsirairay.
Ny kinova LibreOffice manaraka dia horaisina amin'ny taona ho avy
LibreOffice 6.2 fihenam-bidy dia tapaky ny volana Novambra, ka mbola misy fotoana ny fanatsarana.
LibreOffice dia misy amin'ny fiteny 120 mahery (ao anatin'izany ny Espaniôla, Catalan, Basque ary Galisiana) ary ho an'ny rafitra fiasa samihafa, ao anatin'izany ny Microsoft Windows, macOS ary GNU / Linux (ao anatin'izany ny mpijery LibreOffice ho an'ny Android), ary koa amin'ny endrika an'ny efi-tranon'ny birao an-tserasera.Nyawang
Ity asa farany ity dia ho ampahany amin'ny fanavaozana ny LibreOffice 6.2 izay havoaka amin'ny taona ho avy amin'ny faran'ny volana janoary na ny voalohan'ny volana feb.
Ity fanontana farany an'ny LibreOffice ity dia manana fampifanarahana rakitra tsara kokoa amin'ny antontan-taratasy Microsoft Office. Amin'izao fotoana izao ny kinova farany azo tsapain-tanana izay azontsika jerena amin'ity suite birao ity dia ny kinova LibreOffice 6.1.2
Na dia ho an'ireo mpankafy te-hanampy amin'ny fametahana lesoka aza dia afaka mahazo ny kinova fampandrosoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » LibreOffice dia manomana ny fanohanana QT5 ho an'ny kinova manaraka